Jiro amin'ny alina sy fanilo multifunctional: Amin'ny maha-jiro latabatra azy, dia mety hamorona rivo-piainana mampionona sy tantaram-pitiavana, mety tsara amin'ny haingo sy manazava ny efitranonao, ny efitrano fandraisam-bahiny, ny birao ary ny zoron'ny trano sy ny tontolo ara-barotra. Ankoatra izany, dia azo ampiasaina amin'ny camping, BBQ, toe-javatra vonjy taitra ary ilaina jiro hafa.
Famolavolana Lanterana tokana - Ny fanilo mitoby KENNEDE dia vita amin'ny lanterana mahery, ary ny famolavolana rehetra dia noforonin'ny injeniera Kennede.
Jiro jiro LED miaraka amin'ny jiro alina ho an'ny fampiasana an-trano
Jiro birao miasa amin'ny bateria: Misy batterie naorina, tsy mila ampidirina rehefa mampiasa, tsy misy tariby ary azo entina entina any amin'ny toerana malalaka, indrindra fa voafetra ny fivoahana ary misy ny fahatapahan'ny herinaratra ny androm-piainan'ny bateria raha tsy ampiasaina ela)
Dimmable Touch Control Table Lamp: Touch saro-pady fanaraha-maso amin'ny 3-ambaratonga famirapiratana Adjustable, tsara indrindra ho an'ny mamaky, miasa, mianatra, asa tanana, fampisehoana, camping na vonjy taitra fampiasana, mety ho an'ny oniversite dorm, birao, efitra fatoriana, efitra fandraisam-bahiny, efitranon'ny ankizy, efitra fandroana, sns
FAST & POWERFUL HEATING - Miaraka amin'ny singa fanafanana seramika mandroso, Teioe fanafanana habaka kely manome fanafanana haingana kokoa sy mahomby kokoa ny angovo. Mafana hatramin'ny 70°F ao anatin'ny 3 segondra ity fanafanana elektrônika ity, fanafana toerana tonga lafatra ho an'ny efitrano fatoriana, birao ary birao.
Izy io dia HEPA mpanadio rivotra mpanadio rivotra vaovao miaraka amin'ny rafitra fanadiovana mialoha ny rivotra manala ny setroka, vovobony, dander ho an'ny trano, efitra fatoriana, efitrano fandraisam-bahiny, lakozia
rehefa mila miova ny sivana dia hirehitra ny famantarana mena mba hampahatsiahy.
hafainganam-pandeha ambany / midspeed / highspeed / off.
Miaraka amin'ny fomba torimaso.
miaraka amin'ny sivana H13
miaraka amin'ny boaty hanitra
Kettle elektrika fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny vera
Kettle elektrika fanaraha-maso mari-pana tsara]: Fametrahana fandaharana marani-tsaina isan-karazany amin'ny fandrotsahana dite amin'ny hafanana mety. Ity kettle dite elektrika ity dia manome fanaraha-maso mari-pana (160℉-200℉) mba hahazoana ny dite, kafe na mampangotraka tsotra izao. Ary izany koa no fitaovana tonga lafatra ho an'ny oatmeal, paty, atody, ronono mafana ary famonoana otrikaretina.
Fampiasa mavitrika 10-22 - ny AWK-701 dia manasongadina programa 16 marani-tsaina amin'ny fanaovana dite isan-karazany, dite voankazo, fomba fanamboarana nentim-paharazana Aziatika, sy ny maro hafa. Ho fanampin'ireo, ny fanaraha-maso dia miasa maro, mamela anao hanao karazan-javatra tsy voatanisa ao amin'ity kettle rano revolisionera ity.
Fanadiovana rivotra marika KENNEDE ho an'ny fampiasana efitrano lehibe an-trano
H13 True HEPA Filter Cleaner ho an'ny allergie na tsy fahazakana sy ny biby fiompy, mpifoka sigara, bobongolo, vovobony, vovoka, fofona mangina ho an'ny efitra fatoriana